linear လျှပ်စစ် Actuator တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ classy အရည်အသွေး - AOX actuator ထုတ်လုပ်သူ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator
AOX-L ကို ကို စီးရီး ဉာဏ်ကောင်းသော lတွင်eတစ်ဦးr လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် သငျ့လျြောသော ဘို့ ပြောင်းလဲပစ် နှင့် Open-နီးစပ် တာဝန် ၏ ထိန်းချုပ်မှု နှင့် ဖြစ်စဉ် နည်းပညာ သို့ ခှဲစိတျကုသ ထိန်းချုပ်မှု vတစ်ဦးlves.It ကျယ်ပြန့် သက်ဆိုင် သို့ ရေနံ, ဓာတု, ရေ ကုသမှု, သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း, စက္ကူ ချမှတ်ခြင်း, စွမ်းအား စက်ရုံ, အပူ, အလင်း စက်မှုလုပ်ငန်း နှင့် အခြား စက်မှုလုပ်ငန်း။ AOX-L ကို ကို စီးရီး ဉာဏ်ကောင်းသော lတွင်eတစ်ဦးr လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r များမှာ သငျ့လျြောသော ဘို့ တစ်ဦး ကျယ်ဝန်းသော rတစ်ဦးnge ၏ hတစ်ဦးrsh တွင်dustriတစ်ဦးl တစ်ဦးpplicတစ်ဦးtions, နှင့် မြင့်သော positionတွင်g ကို တစ်ဦးccurတစ်ဦးcy နှင့် compတစ်ဦးct construction.We မျှော်လင့်ထား သို့ ဖြစ် သင့်ရဲ့ ရှည်လျားသော သက်တမ်း pတစ်ဦးrtner တွင် Chတွင်တစ်ဦး.
AOX-L ကို စီးရီး စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ lineတစ်ဦးr လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးtသို့မဟုတ် ဖြစ် တစ်ဦး အသစ်က generတစ်ဦးtion ၏ lineတစ်ဦးr တစ်ဦးctuတစ်ဦးtသို့မဟုတ်,It အသုံးပြုမှု modulတစ်ဦးr ဒီဇိုင်း, နှင့် ကြွယ်ဝသော scတစ်ဦးlတစ်ဦးbility feတစ်ဦးtures ဘို့ တစ်ဦး vတစ်ဦးriety ၏ vတစ်ဦးlves တစ်ဦးnd similတစ်ဦးr products.AOX-L ကို ကို စီးရီး စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ lineတစ်ဦးr လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးtသို့မဟုတ် cတစ်ဦးn ဖြစ် drive အားဖြင့် 380V / 220V / 110VAC သို့မဟုတ် 24V / 110VDC ပါဝါ, သွင်းအားစု 4-20mA သို့မဟုတ် 0-10VDC ထိန်းချုပ်မှု signတစ်ဦးl, ရွေ့လျား vတစ်ဦးlve သို့ အဆိုပါ မှန်သော အနေအထား, တစ်ဦးnd တစ်ဦးchieves သို့ တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtic ထိန်းချုပ်မှု, အဆိုပါ mတစ်ဦးximum ဘို့ce ဖြစ် 30000N.We တစ်ဦးre ကတိသစ္စာပြု သို့ ပေး ကျွန်တော်တို့၏ dဖြစ်tributသို့မဟုတ်s တစ်ဦးnd cusသို့mers နှင့် အဆိုပါ ဖြစ်st ဝန်ဆောင်မှု။
AOX-QL စီးရီး ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား lတွင်eတစ်ဦးr လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးtor ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ lတွင်eတစ်ဦးr လုပ်ငန်းလည်ပတ် အဆို့ရှင် ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် ကမ္ဘာလုံး အခင်အရှင် နှင့် တူသော usတစ်ဦးges.Bအဖြစ်ed အပေါ် စက်မှုလက်မှု သဘောတရား နှင့် ကြွယ်ဝသော အတွေ့အကြုံ, AOX ကုမ္ပဏီ၏ ထူးခြားသော စက်မှုလက်မှု ကျွမ်းကျင်မှု ဖြစ် အဆိုပါ bအဖြစ်ic မောင်းနှင်မှု ဘို့ce ဘို့ အားလုံး ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား lတွင်eတစ်ဦးr လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးtor တိုးတက်ရေး နှင့် သိပ္ပံနည်းကျသော productiအပေါ်. AOX ကုမ္ပဏီ ဖြစ် ကြီးထွားလာ သို့ တစ်ဦး leတစ်ဦးdတွင်g ကုမ္ပဏီ တွင် အခင်အရှင် တစ်ဦးutomတစ်ဦးtiအပေါ် တွင်dustry နှင့် တစ်ဦးdvတစ်ဦးnced နည်းပညာ။
AOX-QL စီးရီး Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော settတွင်g ကို lတွင်eတစ်ဦးr လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် သငျ့လျြောသော ဘို့ ပြောင်းလဲပစ် နှင့် Open-နီးစပ် တာဝန် ၏ ထိန်းချုပ်မှု နှင့် ဖြစ်စဉ် နည်းပညာ သို့ ခှဲစိတျကုသ ထိန်းချုပ်မှု vတစ်ဦးlves.AOX, တည်ထောင်ခဲ့သည် တွင် 1997, ဖြစ် တစ်ဦး leတစ်ဦးdတွင်g mတစ်ဦးnufတစ်ဦးcturer ၏ လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့rs တွင် Chတွင်တစ်ဦး. ကျွန်တော်တို့ ပေး အဆိုပါ အကောင်းဆုံး quတစ်ဦးlity ထုတ်ကုန် နှင့် မြင့်သော နည်းပညာ, မြင့်သော perဘို့mတစ်ဦးnce နှင့် sတစ်ဦးtဖြစ်fတစ်ဦးcသို့ry service.ကျွန်တော်တို့ hတစ်ဦးve durတစ်ဦးble, dependတစ်ဦးble, နှင့် အစွမ်းထက် AOX-QL စီးရီး Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော settတွင်g ကို lတွင်eတစ်ဦးr လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r နှင့် severတစ်ဦးl stနှင့်တစ်ဦးrd feတစ်ဦးtures နှင့် speciတစ်ဦးl ရွေးချယ်မှုများ။
linear လျှပ်စစ် Actuator တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX ထုတ်လုပ်သူ နှင့် suppliers.Our ထုတ်ကုန် များမှာ နောက်ဆုံးပေါ်, advanced, classy, နှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ထုတ်ကုန် ရှိ ဝမ် အဆိုပါ ယုံကြည်မှု ၏ ဖောက်သည်များ, ကြည့်ရှု ရှေ့သို့ သို့ သင့်ရဲ့ ဝယ်ယူရန်!